Otu esi eme ka mmemme na oge - ụlọ akwụkwọ techics nke ITS
Ruo ogologo oge, sayensị egosiwo na anyị nwere ike ime otu ihe n'oge ọ bụla. Ihe kachasị mkpa, anyị nwere ike ịga naanị otu ọrụ uche na otu usoro uche na otu usoro uche n'otu oge ọ bụla: anyị nwere ike ikwu ma ọ bụ gụọ ma ọ bụghị ime ma ugbu a. Anyị nwere ike ịnwe otu echiche n'oge ọ bụla, na ka anyị na-agbanye onwe anyị ịgbanwe site na otu ihe wee gaa na nke ọzọ, ka anyị na-atụfu ikike anyị nwere ọgụgụ isi.
Na 2001, Joshua Rubinstein, Ph.D., Jeffrey Evans, Ph.D., na David Meyer, Ph.D., duziri ma kesaa nkata anọ nke ụmụaka na-etolite n'etiti ọrụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ilekọta ihe gbasara mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ ịmekọta isiokwu nke geometric. Ihe omumaputa maka oru nile achoputara:
Ndị òtù ahụ furu efu mgbe ha chọrọ ịgbanwe ma malite otu ozi wee gaa na nke ọzọ.
Dika ihe ndi ozo choputara ka ndi mmadu megharia, ndi ozo na-eme ha oge ha furu.
N'ihi nke a, ndị mmadụ n'otu n'otu na-ewepụ oge dị ukwuu iji gbanwee n'etiti ọganihu na-aga n'ihu.
Ihe eji emefu oge bu ihe a ma ama mgbe ndi otu gbanwee ka ha buru ihe ndi ohuru.
O di nkpa ichota onwe anyi n 'ugbua; N'ezie, m na-agwa m ihe mgbochi ntanye nke 25 nkeji iji rụọ ọrụ, na-ezute site na nkeji ise nkeji, na-esite na ntinye minit 25 (rehash ruo mgbe ọrụ ahụ gasịrị). Nkwụsịtụ bụ ihe ụfọdụ, ma agbanyeghị bụ ihe ọzọ. Nkwụsịtụ dị mkpụmkpụ, na-eche ma na-eche echiche. Diversions na-achọ ka anyị na-abanye ma mebie ọrụ anyị kpamkpam.
Meyer ekwuola na ọbụna mmechi ncheta dị nkenke site na ịmalite n'etiti azụmahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka 40 pasent nke oge mmadụ bara uru. O yikarị ka ọ gaghị ekwe omume na anyị ga-enwe ikike ịmeghachi omenala ihe omume iji kweta na ị nwere ike ịde akwụkwọ na ịmecha otu ozi tupu ịmalite ọzọ.
Na ohere nke na omume a enweghị ike ịgbanahụ, ọ ga-enwe ike ime iji rụọ ọrụ anyị n'oge? Ma eleghị anya, mmeghachi omume kwesịrị ekwesị bụ otu njirimara nke na-eji uru 'uru na uru.
Nanị Ntube Ntube Ntube na Nwepụta Ọdịdị
Inyocha oge na eme ihe nile ka eji eme ihe site na iji otu onye na-achọta ihe n'eziokwu na onye kachasị mma. Nke kachasị mma, otu ihe na-eme ka anyị nwee 50 pasent nke ga-arụzu. Anyị nwere ike ịmepụta ohere ndị ahụ na ọnụọgụ abụọ site na-anọchi anya ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnweta uru na arụmọrụ ha, nke anyị mụtara site na nyocha dị n'etiti 72 na 74 pasent. M ga - eji usoro 70 kwadoro maka enweghị mgbalị.
Na Nquation 1 nke na - ewe, d na - ekwu okwu ruo oge, ọ na - ekwu okwu banyere nrụgide a na - atụ anya ka ọ rụchaa ọrụ, a na - ekwu okwu na ịnweta ngwa ngwa na p na - ekwu maka uru bara uru nke onye na - Njirimara 2 maka njirimara maka d.
1 Equation. Atụmatụ Ejikọta Nanị Iji Nweta na Ọdịdị
2 Equation. Atụmatụ Ejikọta Nanị Iji Nweta na Ọdịmma Ihe Nlereanya
Ọnọdụ 2. Atụmatụ Ejikọta Nanị Iji Nweta na Ọdịmma Ihe Nlereanya
Àgwà nke usoro a
Usoro a bara uru mgbe awa a na-enye ya dị elu na ọrụ ahụ bụ ezigbo nkịtị ma dị mfe ịchọpụta.
Akwụsị nke usoro a
Anyị n'ozuzu maara otú o si bụrụ ihe nhụsianya ọ bụ maka ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ka ha kwupụta, na ihe ọ bụla jikọrọ ha, kpọmkwem ihe ọmụmụ ha. Mkparịta ụka, ma ọ bụ ozi na-agbanwe, bụ ọhịa na omenala ọsọ ọsọ. Ebe ọ bụ na ịrụ ọrụ a siri ike adịghị agbanwe agbanwe, anyị kwesịrị iji mgbakọ na mwepụ na-emetụta.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji chọpụta oge na ụfọdụ dị oke karịa ndị ọzọ. Ha niile na-eso nsogbu. Anyị na-achọ ịmepụta atụmatụ anyị na-enyocha na ọnụ ọgụgụ kachasị mma, nke na-eme ka o sie ike ịkwado maka nkwenye ndị a na-ezighị ezi na njedebe ndị a. Ihe kachasị mma, otu ọnụ ọgụgụ a na-ejikọta ọnụ ga-enye anyị ikikere 50 percent ihe ịga nke ọma. Anyị nwere ike ịgbasa ohere ndị ahụ site na ịnweta gander n'okpuru ọnọdụ kacha mma na ọtụtụ njirimara dị egwu, na mgbakwunye na ịnweta ngwa ngwa na arụmọrụ.